Madaxdii hore ee Mareykanka oo ku kulmay kulan dhaqaale lagu uruurinayay - BBC News Somali
Madaxdii hore ee Mareykanka oo ku kulmay kulan dhaqaale lagu uruurinayay
Image caption Madaxdii soo martay xukunka Mareykanka
Shan madaxweyne oo soo maray xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa isugu yimid kulan dhaqaale loogu uruurinayay dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay duufanadii ku dhuftay Mareykanka sannadkan.
Madaxdan oo kala ah Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton, George HW Bush and Jimmy Carter ayaa isugu yimid gobolka Texas ee Mareykanka.
Madaxweynayashan oo kasoo kala jeeda xisbiyada Dimoqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa kulmay ayagoo ka duulaya barnaamij gargaar oo loogu magac daray '' One America Appeal'', kasoo wax looga qabnaayo dhibaatooyinkii ka dhashay duufanada Harvey, Irma iyo Maria.
Kulankan ayaa waxaa lagu uruuriyay lacag dhan soddon iyo kow milyan oo doolar, waxaana qorshaha lagu caawinayo dadkani lagu daray dadka kale oo iyaguna kunool gobolka Florida, Puerto Rico iyo jasiirada US Virgin.
Madaxweyne Obama oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay inay ka go'antahay sidii loo caawin lahaa dadkaasi.
"Anagu hadaan nahay madaxweynayaashi hore ee Mareykanka waxaan dooneynaa inaan caawina walaalahena Mareykanka, si ay uga soo kabtaan dhibaatooyinka ka dhashay duufaanada," waxaa sidaasi yirir madaxweynihii hore ee Mareykanka Barrack Obama.
Dhamaan shanta madaxweyne ee soo maray xukunka Mareykanka ayaa kasoo muuqday masraxa kulanka, waxaase kulanka ka baaqday madaxweynaha imika talada haya ee Donald Trump, oo farriin uu soo diray kulanka kahor madaxda halkaasi timid, waxaana uu ku ammaanay shaqada ay wadaan.